BREAKING : डरलाग्दो किसिमले फैलियो कोरोना नेपाल मा फेरि लकडाउन हुँदै ? – Dainiki Online
BREAKING : डरलाग्दो किसिमले फैलियो कोरोना नेपाल मा फेरि लकडाउन हुँदै ?
27/03/2021 27/03/2021 adminLeaveaComment on BREAKING : डरलाग्दो किसिमले फैलियो कोरोना नेपाल मा फेरि लकडाउन हुँदै ?
आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अकस्मात् एउटा सूचना जारी गर्‍यो । कोरोना भाइरससम्बन्धी सूचनामा मन्त्रालयले केही सन्देश, आग्रह र केही निर्देशन दिएको छ । देशभर भिडभाड हुने कुनै पनि किसिमको सभा सम्मेलन नगर्न आग्रह गरिएको छ ।अहिले भारतमा कोरोना भाइरस स’ङ्क्रमि’त बढिरहेका छन् । नेपालमा समेत सङ्क्रमण बढ्न सक्ने भन्दै देशभर सभा, जु’लुस, र्‍या’ली, भेला, जमघट, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक र भि’डभाड हुने व्यवसाय र कार्य नगर्न नगराउन आग्रह गरेको छ ।
यति मात्रै होइन मन्त्रालयले हात धुन, मास्कको प्रयोग गर्न र सामाजिक दूरी कायम गर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि सबैलाई पुनः स्मरण गराएको छ ।कोरोना जो’खिम सकिएको छैन । मास्क लगाउन नछोडौँ । स्यानिटाइजर प्रयोग गरिरहौँ । हात धुने बानी नबिर्सौँ । भौतिक दूरी कायम राख्न नभुलौँ । पछिल्लो समय कोरोना त केही होइन रहेछ भन्ने धेरैलाई परेको छ ।
तर, यसमा एक रति पनि सत्यता छैन । नेपालमा अहिले जे सोचिरहेका छन्, त्यस्तै सोच्दा इटालीमा भयावह स्थिति आएको नबिर्सौँ ।आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाले पनि केही सङ्केत गर्छ । सरकारले अहिले नागरिकलाई सचेत मात्र गराएको हो । खे’लाँची गरियो भने फेरि लकडाउन-२ भो’ग्न पर्ने हुनसक्छ ।
श्रीमान र छोराछोरी छोडेर भारतीयसँ‌ग भागेकी कञ्चनपुरकी भागरथी राना कसरी ला’श बनेर फर्किइन्
नेपालमा पनि यति गते बाट टिकटक बन्द हुदै (हेर्नुहोस् पुरा भिडियो)
आयो खुसीको खबर : रवी लामीछानेले खोले अस्पताल, अब सबैको उपचार नि:शुल्क हुने । सबैले शेयर गरौ ।